Mety ve ny Manao Zavatra Maro Indray Miaraka? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Rosianina Tetun Dili Tiorka Tseky Twi Valencienne Vietnamianina Yorobà
Mahay manao zavatra be dia be indray miaraka ve ianao?
Betsaka no mieritreritra hoe raha mbola kely izy dia efa zatra mampiasa fitaovana maoderina, dia ho mora kokoa aminy ny manao zavatra be dia be indray miaraka. Raha efa lehibe kosa izy vao mampiasa fitaovana maoderina, dia ho sarotra aminy ny manao zavatra be dia be indray miaraka. Tena marina ve anefa izany?
Mitsitsy fotoana ianao rehefa manao zavatra be dia be indray miaraka
Lasa betsaka kokoa ny zavatra vitanao indray miaraka, arakaraka ny anaovanao an’ilay izy
Ny tanora no tena mahay an’ilay izy raha oharina amin’ny olon-dehibe
Raha mieritreritra ianao hoe “marina” ny iray amin’ireo na izy rehetra, dia azo lazaina hoe diso hevitra ianao.
Mieritreritra ve ianao hoe afaka manenjika bitro roa? Mety ho vitanao ihany ilay izy raha tsy mila ifantohana be ilay anankiray. Raha sady mihaino hira, ohatra, ianao no manadio trano, dia mety ho voadionao tsara ihany ilay trano.
Ahoana anefa raha samy mila ifantohana ilay zavatra tianao hatao? Mety tsy ho vitanao tsara izy roa. Niresaka momba an’izany ny tovovavy iray atao hoe Katherine. Izao no nolazainy: “Vitanao daholo ilay izy, fa vitanao kitoatoa.”
“Nisy fotoana aho sady niresaka tamin’ny olona no niezaka namaly sms. Tsisy henoko ny ankamaroan’ny zavatra notenenin’ilay olona, sady diso koa ny ankamaroan’ny zavatra nosoratako tao amin’ilay sms.”—Caleb.
Izao no nosoratan’ny manam-pahaizana iray atao hoe Sherry Turkle: “Rehefa manao zavatra be dia be indray miaraka ianao, ... dia tsy vitanao tsara intsony ilay zavatra ataonao. Miasa be mantsy ny atidohanao, dia mieritreritra ianao hoe mahavita zavatra tsara kokoa nefa ny mifanohitra amin’izay no izy.” *
“Misy fotoana aho mieritreritra hoe sady mahavita mandefa sms no miresaka amin’ny olona. Avy eo anefa ny zavatra tokony hosoratako amin’ilay sms indray no lasa teneniko amin’ilay olona, dia ny zavatra tokony hoteneniko amin’ilay olona indray no lasa soratako ao amin’ilay sms!”—Tamara.
Manasaro-javatra ny olona manao zavatra be dia be indray miaraka. Ela kokoa, ohatra, izy vao mahavita ny devoarany, na tsy maintsy averiny indray ilay izy satria tsy vitany tsara. Lasa tsy manam-potoana hanaovana zavatra hafa izy noho izany.
Izao no nolazain’i Thomas Kersting, mpitsabo aretin-tsaina sady mpanome torohevitra ny mpianatra: “Hoatran’ny toerana fampirimana taratasy ny atidoha. Tokony hilamina tsara ilay izy. Mikorontana be anefa ny an’ny olona manao zavatra be dia be indray miaraka.” *
“Rehefa manao zavatra be dia be indray miaraka ianao, dia lasa misy tsipirian-javatra tsy hitanao nefa tena ilaina. Lasa tsy maintsy miezaka be ianao, dia betsaka kokoa ny fotoana laninao amin’ilay izy.”—Teresa.
Hoatran’ny hoe miezaka mitondra fiara amin’ny lalana roa samy hafa ianao rehefa manao zavatra be dia be indray miaraka.
Zavatra iray ihany ifantohana. Mety ho sarotra izany raha efa zatra nanao zavatra be dia be indray miaraka ianao. Ohatra hoe sady manao devoara no mandefa sms. Milaza anefa ny Baiboly hoe: ‘Fantaro tsara izay zava-dehibe kokoa.’ (Filipianina 1:10) Ahoana raha mila manao zavatra be dia be ianao? Jereo izay zava-dehibe kokoa, dia iny atao voalohany. Mifantoha amin’iny zavatra iny avy eo mandra-pahavitan’ilay izy.
“Azo oharina amin’ny zazakely ny atidohanao rehefa tsy mifantoka. Mila mifehy azy ianao, na dia mora kokoa aza ny mamela azy hanao izay tiany.”—Maria.
Esory izay zavatra manelingelina. Te hijery ny telefaoninao foana ve ianao rehefa manao devoara? Aza avela ao amin’ny efitra misy anao ilay izy. Vonoy ny tele, ary aza mieritreritra ny hijery tambazotran-tserasera mihitsy! Milaza ny Baiboly hoe: “Mahaiza manararaotra fotoana.”—Kolosianina 4:5.
“Tena mety be amiko ilay hoe zavatra iray ihany no ifantohana. Falifaly kokoa aho rehefa mahavita zavatra iray, dia mifindra amin’ny zavatra hafa. Tena afa-po be aho avy eo.”—Onya.
Mifantoha amin’ilay olona iresahanao. Raha sady mikitikitika telefaonina ianao no miresaka amin’ny olona, dia lasa tsy mahafinaritra ny resakareo. Tsy mahalala fomba koa ianao raha manao an’izany. Milaza ny Baiboly hoe izay tiantsika hataon’ny olona amintsika no tokony hataontsika aminy.—Matio 7:12.
“Misy fotoana aho miresaka amin’ny zandrinay vavy, dia ilaozany mandefa sms na manao zavatra hafa amin’ny telefaoniny. Sorena be aho rehefa hoatr’izany! Izaho koa anefa aloha manao hoatr’izany ihany indraindray e!—David.
“Rehefa mila mifantoka amin’ny zavatra iray aho, dia tsy asiako feo ny telefaoniko. Betsaka kokoa ny zavatra vitako amin’izay sady vita tsara kokoa ilay izy.”—Javan.
“Sarotra aloha ilay hoe mifantoka amin’ny zavatra iray ihany e! Mahavita zavatra tsara kokoa anefa ianao rehefa manao an’izany. Aleo manao zavatra kely nefa vita tsara, toy izay mahavita be nefa kitoatoa.”—Kiara.
Famerenana: Mety ve ilay hoe manao zavatra be dia be indray miaraka?
Raha manao zavatra roa indray miaraka ianao nefa samy mila ifantohana, dia mety tsy ho vitanao tsara izy roa.
Manasaro-javatra ny olona anankiray raha manao zavatra be dia be indray miaraka.
Raha te hahavita zavatra tsara ianao, dia mifantoha amin’ny zavatra iray ihany.
Raha sady miresaka amin’ny olona ianao no manao zavatra hafa dia tsy hahafinaritra ilay resaka. Tsy mahalala fomba koa ianao raha manao an’izany.
Esory izay zavatra manelingelina. Mety hitarika anao hanao zavatra be dia be indray miaraka mantsy izany.
^ feh. 10 Avy amin’ilay boky hoe Reclaiming Conversation.
^ feh. 13 Avy amin’ilay boky hoe Disconnected.
Misy toe-javatra telo mety hahatonga anao tsy hifantoka rehefa mampiasa fitaovana elektronika ianao. Inona anefa no hanampy anao hahay hifantoka kokoa?
Mahaiza Mandanjalanja Rehefa Mampiasa Fitaovana Elektronika
Mety hahasoa nefa mety handrava ny tokantranonao ny fitaovana elektronika. Misy vokany ao an-tokantranonao ve izy ireny?
Hizara Hizara Mety ve Ilay hoe Manao Zavatra Be dia Be Indray Miaraka?
ijwyp no. 103